Mapichisi muwaini tsvuku, dhizeti inonaka. | Kicheni Mapepa
Peaches muwaini tsvuku, dessert yakafuma kwazvo. Iye zvino tine mapichisi akanaka kwazvo uye isu tinofanirwa kutora mukana wekuzvidya nekugadzirira madhiri navo.
Nzira yekuvabika iri nyore kwazvo. Kana iwe uine wekubika nekukurumidza, mumaminitsi mashanu iwe unovagadzirira. Kana zvisiri, zviise muhari uye varege vabike kusvikira vanyorova. Kuti uzive, iwe unongofanirwa kubaya pichisi neinoswerwa meno uye iwe uchaona kuti yakapfava sei.
Uye kuti uipe kuravira iwe unogona zvakare kuisa zvinonhuwira iwe zvaunoda, senge mavhavha, nyeredzi anise ...
1 litre yewaini tsvuku
1-2 sinamoni tsvimbo
200 gr. cheshuga
2 zvinonhuwira clove (kusarudza)
Kugadzirira mapichisi muwaini tsvuku, isu tinotanga nekuisa pani kana hari ine waini tsvuku neshuga, sinamoni, rind roni uye zvimwe zvinonhuwira kana uchida, kana zvisiri sezvazviri. Tinomhanyisa zvese mushe uye ndokuisa pamoto.
Isu tinosvuura mapichisi, ndinovasiya vakazara, zvinogona kuitwa muhafu, kubvisa pfupa kana zvidimbu. Ndinovasiya vakakwana.
Kana waini muhari yatanga kubika, wedzera mapichisi.
Tinovarega vachibika, tichivashandura kuitira kuti vagadzirirwe zvese. Tichaisiya ichibika pamusoro pekupisa kwepakati kusvika vanyoro nezve 1 awa, zvinoenderana nemapichisi. Kana iwe ukavaita mune yekumanikidza yekubika mumaminitsi masere ivo vanogadzirira.
Kana ivo varipo, tinovarega vachitonhorera muhari. Kamwe pavanodziya, tinovaburitsa uye tinoderedza waini pamusoro pekupisa kukuru kusvikira yati svibei senge muto, kana kuri kuda kwako tinodzima. Isu tinoshumira maperekisi nemuto uyu
Vanochengeta zvakanaka mundiro yakafukidzwa newaini tsvuku mufriji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Delicatessen » Peaches muwaini tsvuku
Nungu, mupunga uye chokoreti keke